ဇော်ငြိမ်းအေး ( ဆေး - ၂ ): 'ကံ' နှင့် ပတ်သက်သော အမြင်မှားအချို့ (Karma)
ကံ နှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောအမြင်တို့ကို "အဂုင်္တ္တရနိကာယ်"၌ ဖေါ်ပြထားသည်။ ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သည် အောက်ပါအမြင်တို့ကို စိစစ်သုံးသပ်ပြီး ပယ်စွန့်လိမ့်မည်။
အရာရာတိုင်းသည် အတိတ်ကံ၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် ဖြစ်ရသည်ဟု ယုံကြည်မှု။
အရာရာတိုင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုဆန္ဒကြောင့် ဖြစ်ရသည်ဟု ယုံကြည်မှု။
အရာရာတိုင်းသည် အကြောင်းမဲ့ ဖြစ်ရသည်ဟု ယုံကြည်မှု။
အကယ်၍ လူတစ်ယောက်သည် လူသတ်သမား၊ သို့မဟုတ် သူခိုး၊ သို့မဟုတ် ကာမကျူးလွန်သူဖြစ်သွားပါက၊ သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ ထိုမကောင်းမှုတို့သည် အတိတ်ကံကြောင့်၊ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကြောင့်၊ သို့မဟုတ် အကြောင်းမဲ့ ဖြစ်ရသည်ဆိုပါက ထိုလူသည် သူပြုခဲ့သော မကောင်းမှုအတွက် တာဝန်ယူရန် မလိုအပ်တော့ပေ။ အကြောင်းမှာ အရာရာတိုင်းသည် ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်သည်ဟု ယူဆသောကြောင့်ပင်။
၎င်းအပြင် "ကံသည် လူတို့၏ ယုံကြည်သက်ဝင်မှုတွေအရ ယုံကြည်ကြသူတွေအတွက်သာ အကျိုးဖြစ်သည်" ဟူသော အခြားအမြင်မှားတစ်ခုလည်း ရှိသေးသည်။
သို့ရာတွင် နောင်ဘဝ၌ ဖြစ်ရမည့် လူတစ်ယောက်၏ ကံကြမ္မာသည် သူ သို့မဟုတ် သူမ ရွေးချယ်သော ဘာသာတရားတစ်ခုခု အပေါ်၌ လုံးဝတည်မှီခြင်း မရှိပါ။ မည်သည့်ဘာသာတရားကို ယုံကြည်သက်ဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ သူ၏ ကံကြမ္မာသည် သူပြုလုပ်ခဲ့သော ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံအပေါ်၌ လုံးလုံးလျားလျား မူတည်နေပါသည်။
သူကိုင်ဆောင်ထားသော ဘာသာရေးအမှတ်တံဆိပ်က အရေးမကြီးပါ။ ကောင်းမှုပြုကာ အပြစ်ကင်းစင်သော ဘဝတစ်ခုကို ဦးတည်နေသမျှကာလပတ်လုံး နောင်ဘဝ၌ ချမ်းသာခြင်းရှိသော သုဂတိကို ရောက်ရမည်မလွဲပါ။ မကောင်းမှုလွန်ကျူးကာ ယုတ်မာသောစိတ်သဘောကို သိုမှီးသိမ်းဆည်းထားသူအတွက်လည်း ဆင်းရဲသော ဒုဂ္ဂတိကို ရောက်ရမည်မုချပင် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် သူတို့သာလျှင် ကံထူးသူများ၊ ကောင်းချီးပေးခံရသူများဖြစ်ပြီး သေလွန်ပြီးနောက် နတ်ပြည် (ကောင်းကင်ဘုံ)သို့ သွားရမည်ဟု မကြွေးကြော်ကြပါ။ မည်သည့်ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်ဘာသာကိုမျှ မကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ 'မနောကံ'ဟု ဆိုအပ်သော စေတနာတစ်ခုတည်းက လူတစ်ယောက်၏ ပစ္စုပ္ပန်၊ တမလွန် နှစ်ခုစလုံးဖြစ်သော ဘဝကံကြမ္မာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးပါသည်။
ကမ္မဝါဒသည် သေလွန်ပြီးနောက် တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်သော ဝါဒမဟုတ်ပါ။ စိတ်ကူးယဉ် ထင်ယောင်မှား ပျော်ရွှင်မှုသုခကို နောက်ဘဝတွင် ရမည် ဟု အာမခံလျက် လူချမ်းသာများကို အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် ဆင်းရဲသားများကို ဖြေသိမ့်ရန် မြတ်စွာဘုရားသည် ဤကမ္မနိယာမကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။
(မှတ်ချက်။ ။ မူရင်း ရေးသူနှင့် ဘာသာပြန်သူတို့ကို ဦးညွတ် ဂါရဝပြုပါသည်။ မြန်မာပြန်ကို ဖတ်ရှုရ ပိုအဆင်ပြေစေရန် အနည်းငယ် တည်းဖြတ် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။)
The misinterpretations or irrational views on karma are stated in the Anguttara Nikaya which suggests that the wise will investigate and abandon the following views:
the belief that everything is the result of what is willed byaSupreme Creator; and
Ifaperson becomesamurderer,athief, or an adulterer, and, if his or her actions are due to past actions or are caused by the whim ofaSupreme Being, or if it happened by mere chance, then this person could not be held responsible for his or her evil action as everything was predetermined.
Yet another misconception about karma is that it operates only for certain people according to their faiths. But the destiny ofaperson in the next life does not in the least depend on what particular religion he or she chooses. Whatever one’s religion may be, one’s fate depends entirely on deeds committed by body, speech, and thought. It does not matter what religious label one holds, one is bound to be inahappy world in the next life so long as one does good deeds and leads an unblemished life. One is bound to be born to leadawretched life if one commits evil and harbours wicked thoughts in the mind.
Therefore, Buddhists do not proclaim that they are the only blessed people who can go to heaven after their death. Whatever religion is professed or without any religious label, karmic thoughts alone determineaperson’s destiny both in this life and in the next. The teaching of karma does not indicateapost-mortem justice. The Buddha did not teach this law of karma to protect the rich and to comfort the poor by promising illusory happiness in an afterlife.
Author: Dr. K. Sri Dhammananda